Soo Saarayaasha Qaybta Cirbadaha iyo Warshad - Soosaarayaasha Nooca Cirbadda Shiinaha
Shaqada is-baabi'inta waxaa si otomaatig ah loo bilaabi doonaa mudista ka dib, si wax ku ool ah looga hortago isticmaalka labaad.
Naqshadeynta qaabdhismeedka qaaska ah waxay awood u siineysaa isku xiraha iskuxiraha inuu kaxeeyo irbadda irbadda cirbadeynta si uu gabi ahaanba ugu laabto galka, si wax ku ool ah uga hortago halista cirbadaha cirbadaha ee shaqaalaha caafimaadka.
Muuqaalka ugu weyn ee Sirinji-ka-dillaaca Sirinjiga waa cirbada cirbadeynta ayaa gabi ahaanba dib loogu soo celin doonaa galkeeda si looga hortago halista cirbadaha. Naqshadeynta qaabdhismeedka qaaska ah waxay awood u siineysaa isku xiraha iskuxiraha inuu wado wadista irbadda cirbadda si uu gabi ahaanba ugu laabto galka, si wax ku ool ah uga hortago halista ulaha irbadaha ee shaqaalaha caafimaadka.
1. Tayada wax soo saarka oo deggan, xakamaynta wax soo saarka otomaatiga ah oo buuxa.
2. Qalabka caaggu ka samaysan yahay wuxuu ka samaysan yahay caag dabiici ah, usha asalka ahna waxay ka samaysan tahay walxaha badbaadada ee PP.
3. Faahfaahin buuxda waxay buuxin kartaa dhammaan baahiyaha duritaanka.
4. Bixi baakado jilicsan oo caag-balaastig ah, agab bey'ad u roon, oo si sahlan loo furi karo